पारसले धमाका मच्चाएपछि कुवेत हार्यो, नेपालको शानदार जित ! (हेर्नुहोस् पूरा भिडियो) - Tufan Media News
Thursday August 22, 2019 |
पारसले धमाका मच्चाएपछि कुवेत हार्यो, नेपालको शानदार जित ! (हेर्नुहोस् पूरा भिडियो)
११ श्रावण २०७६, शनिबार १२:११ 125 पटक हेरिएको
सिङ्गापुरमा जारी आइसीसी विश्वकप टी-२० एसिया छनोटमा नेपालले कुवेतलाई सात विकेटले पराजित गरेको छ।
सिङ्गापुरस्थित इन्डियन एसोसियशन क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ पाएको कुवेतले निर्धारित ओभरमा ९ विकेट गुमाई १४१ रन बनाएको थियो। जसलाई नेपालले १५.५ ओभरमा तीन खेलाडी गुमाउदै पूरा गर्‍यो। नेपालले टी-२० क्रिकेटमा पछ्याएको यो अहिलेसम्मको ठूलो स्कोरको कीर्तिमान हो।
नेपालको जितमा कप्तान पारस खड्काको योगदान महत्त्वपूर्ण रह्यो। उनले आक्रामक इनिङ खेल्दै ६८ रनको महत्त्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी खेले। १४ औँ ओभरको पहिलो बलमा आउट हुनुअगाडि उनले ११ चौका र एक विशाल छक्का प्रहार गरे।
यसअघि नेपाली बलरहरू बसन्त रेग्मी र सन्दीप लामिछानेले ३/३ विकेट लिएका थिए।जितसँगै नेपाल शीर्ष स्थानमा दौडमा एक कदम नजिक पुगेको छ। प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले १९ रन जोडे।
त्यसपछि भेषावकरले जिम्मेवारी पारी खेल्दै अविजित रही खेल जिताउने काम गरे। उनले ३० बलमा ३८ रन बनाए। जसमा ४ चौका र एक छक्का सामेल छन्।
अर्का अविजित खेलाडी रोहित पौडेलले ६ रन बनाउदा एक चौका प्रहार गर्न भ्याएका थिए। नेपालको तीनवटै विकेट कप्तान मोहम्मद कासिफले लिएका थिए। कप्तान खड्काले ६८ रनको अर्धशतक बनाएसँगै उनी टी-२० मा नेपालको लागि सबैभन्दा बढी तीनवटाअर्धशतक बनाउने खेलाडी बनेका छन्।
उनले यसअघि नेदरल्याण्ड्स र मलेशियाविरुद्ध दुई अर्धशतक बनाइसकेका छन्। यसअघि कुवेतले कप्तान कासिफको अविजित ४९ रनको मदतले १४१ रनको चुनौतीपूर्ण स्कोर खडा गरेको थियो।
सातौँ नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका उनले विस्फोटक इनिङ खेल्दै ३६ बलमा २ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे।
नेपालका बलरहरू करण केसी र बसन्त रेग्मीले शुरूवातमा कुवेती ब्याट्सम्यानहरूलाई रन बनाउनबाट रोक्ने काम गरेका थिए। करणले दोस्रो ओभरमा ओपनर मित भावसारलाई आउट गरेर विकेट लिन शुरू गरे। छैटौँ ओभरमा बसन्त रेग्मीले खेलमा जम्न थालिसकेका रभिजा सन्दरुवान (१५ रन) र अदनान इद्रिस (२५ रन) को दुई मुख्य विकेट लिए।
सन्दीप लामिछानेले ३ विकेट लिए। उनले १३ रन बनाएका बिलाल ताहिरलाई पारस खड्काद्धारा क्याच आउट गराए भने उस्मान वाहिद र सिराज खानलाई रन जोड्न नदिइ पवेलियन फर्काए।
अविनाश बोहोराले २३ रन बनाएर खेलिरहेका मोहम्मद अस्लमको विकेट लिए। आइतवार हुने सिङ्गापुरविरुद्धको अन्तिम खेलमा अब नेपाल विजयी भए टी-२० विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनोटमा पुग्नेछ।ग्लोबल छनोट आगामी अक्टोबरमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा हुँदैछ।
विश्व रेकर्ड तोड्ने दौडमा
सिंगापुरमा नेपाली क्रिकेट खेलाडीको
अब नेमार बार्सिलाेना टीम
नेपाली महिलाको रेस्लिङ आज
यिनी हुन् आफ्नो आवाजवाट
रङ्गशालाको बार भत्काउने आरोपी
विदेशमा गर्ने दुःख आफ्नै देशमा गरे ‘विदेश’ यहीँ छ. .
टाइगर श्राफले उठाए २०० किलोको तौल, हेर्नुस भाइरल भिडियो
गायक मनोज धनाडीको आवाजमा “दिलकी रानी ”भिडियो
हिम्मतवाली नायिका रेखा थापाको आज जन्मदिन…
बेल्जियममा श्वेता र गरिमाको पोज ( फोटो फिचर)
चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ४’मा सुहानाको जोडी अनमोल नहुने
प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य परीक्षणको लागि बिहीबार सिंगापुर जाने…
वरिष्ठ कलाकार किरण केसीले भने– रवि रास्ट्रभक्ति हुन्, उनि निर्दाेष छन्, (भिडियो)
चितवन पुगेर न्यायको पक्षमा शिशिर भण्डारी गर्जिए (भिडियो)
रवि लामिछानेको समर्थकविरुद्द माता सबिताको प्रहरीमा उजुरी(भिडियो)